Iimfuno zeentlanzi zentlanzi kunye neentlobo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ukuma komhlaba, Intlanzi
Ukuba unesitiya kwaye unesithuba sedama lamanzi, ngokuqinisekileyo ungathanda ukuba nentlanzi apho kune-aquarium. Iintlanzi ziphinda ziphinde zibengcono kwindalo esingaphantsi kweendonga ezine zeglasi. Nangona kunjalo, amachibi afuna iimfuno ezithile ukuze iintlanzi zikwazi ukuhlala kwimeko entle.
Kule posi uya kufumanisa iimpawu ezifunwa lichibi kwaye indlela yokukhetha eyona ntlanzi. Ngaba uyafuna ukufunda ngayo yonke into?
1 Iimpawu eziyimfuneko echibini
2 Ungayikhetha njani intlanzi yakho
3 Imizekelo yentlanzi yamachibi
3.1 IBarbel yegolide (iBarbus semifasciolatus)
3.2 Ikhubhu (iLeuciscus idus)
3.3 I-Corydora pepper (iCorydora paleatus)
3.4 Intlanzi yeBream (uAbramis brama)
3.5 IGoldfish (iCarassius auratus)
4 Ukutya iintlanzi echibini
Iimpawu eziyimfuneko echibini
Imilinganiselo yephuli ngaphandle kufuneka yanele ukuqinisekisa ukuhlala kakuhle kwintlanzi. Kanye njengaxa simisa itanki leentlanzi kwaye sijonga ubungakanani, kwenzeka into efanayo echibini. Kuhlobo ngalunye lweentlanzi esiza kuzazisa ngazo, ziya kufuna indawo engaphezulu okanye encinci.
Echibini eyona milinganiselo ibalulekileyo bubunzulu. Kuba ngaphandle asinakho ukubakhusela kakuhle kutshintsho lobushushu, ubunzulu kubalulekile. Kwimeko apho amaxesha obanda eqina, iintlanzi ziya kuba nakho ukuzimela emazantsi echibi, apho amaqondo obushushu ahlala ezinzile. Ngaphandle koko, ukuba ubunzulu buncinci, kuya kuba lula kubushushu ukubachaphazela.
Ubuncinane bobunzulu obufanele ukuba unayo ichibi elingaphandle li-80 cm. Oku kuvumela ukuba intlanzi ikwazi ukumelana neqabaka kunye nokwehla okungalindelekanga kubushushu.
Umahluko olandelayo wokujonga ubungakanani. Intlanzi nganye emalunga ne-10 cm ubude ifuna iilitha ezingama-50 zamanzi. Ke ngoko, ngalo lonke ixesha intlanzi ikhula inkulu okanye ifuna ukongeza ezinye, kufuneka wazi ukusikelwa umda kwedike.
Into ebalulekileyo ukubakhusela elangeni nakwingqele kukudityaniswa kwezityalo zasemanzini. Ezi zityalo zibonelela ngomthunzi olungileyo kwaye zibenzele ukutya okuncinci. Ezona zityalo zilungileyo ziinyibiba zamanzi kunye neletisi yamanzi.
Ungayikhetha njani intlanzi yakho
Isiziba silawulwa yimithetho yokuphila efana nale yedama. I-Aquarium. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo ukuba loluphi uhlobo lweentlanzi oza kuzazisa. Into yokuqala yokugcina engqondweni bubungakanani kunye nenani leentlanzi sifuna ukuba nayo. Kuxhomekeka kubungakanani uyakufuna umthamo omkhulu okanye omncinci wamanzi.
Nje ukuba sithathe isigqibo ngobungakanani kunye nenani, kufuneka sijonge indlela ezenzeka ngayo iintlobo ngalunye. Kukho indawo ezinentlanzi ezinobundlobongela ezinokubonisa iingxaki kumaqabane abo. Kukho nezinye ezinokudliwa zezinye iintlobo okanye amantshontsho azo.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo zizidingo ezisisiseko zohlobo lweentlanzi esifuna ukuzibeka. Umzekelo, ukuba siyakhangela intlanzi yetropiki, ubushushu bamanzi kufuneka bube ngaphezulu kwama-20 degrees. Ukuba imozulu yengingqi yethu inamaqondo obushushu asezantsi, iintlanzi ziya kufa. Ngokucacileyo, asinakuba nayo ichibi lamanzi anetyuwa okanye, kwimeko yokuba sinalo, ukhathalelo lwayo kufuneka lube lukhulu.
Kucetyiswa kakhulu ukuba ube ne-akwariyam yokugcina amanzi xa kunokwenzeka ukuba nayiphi na intlanzi igule okanye ivelise kwakhona. Kwezinye zezi meko, singazibeka bucala iintlanzi ekuthethwa ngazo ukuze zingachaphazeli ukuphumla okanye ukusinda kwenzala.
Imizekelo yentlanzi yamachibi
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kubalulekile ukuba sikhethe ngobulumko ukuba zeziphi iintlobo zeentlanzi esiza kuthi sizazise echibini lethu. Kude kube kutshanje, eyona ixhaphakileyo ibikukukhetha Iintlanzi zeKoi ngobude bayo kunye nokumelana. Nangona kunjalo, okwangoku ukuthengiswa kwayo akuvumelekanga ngoko ke kufuneka sijonge ezinye iindlela.
Nangona ezi ntlanzi zasempuma zikhulu kwaye zidumile, zininzi ezinye iintlobo ezifanelekileyo. Ezona zinconywayo zezona zichasayo kwaye zinolwazelelelo olukhulu. Imeko yamachibi ayisiyonyani njengakwii-aquariums. Ukuba intlanzi ikhutshiwe kwindawo yayo yokuhlala yaya kwi-aquarium, kuya kufuneka ivumelane. Kwiindawo ezinamanzi inkqubo yohlengahlengiso iyakhawuleza kuba iimpawu ze-ecosystem apho yayihlala khona ziphinda zenziwe ngenkcukacha zincinci. Oku akwenzeki ngechibi. Nazi iimeko ezisingqongileyo, ke kubalulekile ukuba ukhethe kakuhle.
Emva koko ndiza kukunika uluhlu lweentlanzi ezintlanu ezomeleleyo nezide zamachibi. Ukongeza, banethuba lokuba banokuhlala kakuhle omnye komnye.
Ibhari yegolide (IBarbus semifasciolatus)
Le ntlanzi incinci kakhulu. Akunakufikelela kwi-7 cm. Nangona kunjalo, ihlala ixesha elide kakhulu (iyakwazi ukuhlala iminyaka esi-7). Ezi ntlanzi azimelani namaqondo obushushu asezantsi kakuhle, ke kubalulekile ukuba, ebusika, sizidlulisele kwi-aquarium ekhaya.
Ngokumalunga nokuziphatha kwayo, sinokuthi luxolo kwaye ludinga kuphela uluntu oluncinci. Ukuba ufuna ukuba ne-barbel yegolide, kuya kufuneka uthenge ubuncinci ezintandathu.
Ikhubhu (I-Leuciscus idus)
Le ntlanzi yaziwa ngokuba yiCachuelo. Ezi ntlanzi zingaphila iminyaka engama-20 ukuba bakhathalelwe kakuhle. Ayifuni enye intlanzi ukuze iphumelele etankini kwaye akufuneki sizikhathaze ngamaqondo obushushu. Ezi ntlanzi zivela emantla, ngoko sele ziqhelile ukubanda.
Ipepile yeCorydora (UCorydora paleatus)
Uyayikhumbula i yeyoku? Bafezekile intlanzi ezantsi ezicocekileyo. Kule meko, baya kusinceda sigcine iibhombu zamachibi zicocekile. Ihlala kancinci kancinci kuneentlobo ezibonwe ngasentla, kodwa ubomi bayo bude ngokwaneleyo ukuba bunamathele kuzo. Banokuphila ukuya kwiminyaka emine.
Ukuze impilo yabo iqinisekiswe, kungcono ukufumana iisampulu ezintandathu ukuze bahlala kwindawo encinci.
Intlanzi yeBream (UAbramis uyakhala)
Le ntlanzi ingaphila kwiminyaka eli-17 kwaye ifikelele kubukhulu ukuya kuma-80 cm. Icala elibi lolu hlobo lweentlanzi kukuba njengoko zikhula, ziba ndlongondlongo kwaye zirhabaxa.
Intlanzi yegolideICarassius auratus)
I-carp eyaziwayo yegolide okanye intlanzi yekayiti, yenye ye eyona ntlanzi ixhaphakileyo kumadama. Zikhethwe ngenxa yombala wazo kunye nokulula kokuzalela. Ubungakanani bayo buncinci (zifikelela kwiisentimitha ezingama-20 kuphela). Bahlala ixesha elide, kangangokuba iisampulu ezinekhulu leminyaka yobomi zibhalisiwe.
Yintlanzi ezinokuziphatha okungazukubangela iingxaki okanye ezifuna ezinye izinto eziphilayo. Ngokubanzi, unikezwe ngokulula ukhathalelo, kuyacetyiswa ukuba ufumane ngaphezulu kwekiti yentlanzi.
Iintlanzi zamachibi zifuna ukutya ekulula ukwetyisa kwaye kube lula kangangoko. Ukuba uneentlanzi zeentlobo ezahlukeneyo echibini, kubalulekile ukuba wazi ukuba zeziphi imilinganiselo ekufuneka uzinike zona. Intlanzi nganye ifuna umlinganiselo othile wokutya ukuze yanelise iimfuno zayo. Olona khetho lulungileyo kukuba neentlanzi ezineemfuno ezifanayo kwaye, zona, azinangxaki zokuziphatha.
Okona kutya kulungileyo Ukuloba iintlanzi kuhlala kubiza malunga nee-euro ezingama-8. Inokwanela ukondla iintlanzi ezilishumi elinambini okwethutyana.
Enkosi kule posi uya kuba nakho ukulungela ichibi lakho kwaye ubeke ezona ntlobo zeentlanzi zifanelekileyo. Yonwabela ichibi lakho!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zamachibi
Ndiphose iintlanzi ezintlanu kwitanki langaphandle echibini elilinganisa malunga ne-2m X 9m. Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuzala kwakhona?
Ndine-tarp, ndishiya isiqingatha semitha kwelinye icala singatyhilekanga ukuze iintlanzi zibe nokukhanya apho kwaye, kwangaxeshanye, azizalisi zonke iingcongconi. Ndicinge ukuba njengokuba bezala kwakhona ndiza kususa i-canvas, ukuze babe nokukhanya ngakumbi, ukusukela ngoko, ngenxa yenani labo elikhulu, baya kuzitya zonke iingcongconi.
Ndiyenza ngokuchanekileyo? Naliphi na icebiso?
Ucinga ntoni ngokungenisa amatye e-calcareous echibini le -fishfish?
Idama elineemitha ezi-5 ububanzi, ubudinga nzulu kangakanani? Apha sinamaxesha ama-4 aphawule ubushushu obuphezulu ehlotyeni ngama-35 degrees kodwa rhoqo kwaye ebusika kufume ubushushu ngamanye amaxesha i-2 degrees